Vatyairi Voda Kunzi Vaongororwe Patsva
Hurumende inoti ine hurongwa hwekuda kuti vatyairi vose munyika vange vachiongororwa zvakare, senzira yekuburitsa pachena vose vasingakwanisi kutyaira zvakanaka pamwe nevakawana marezinesi ekutyaira nemukoto.
Munyori mubazi rezvekutakurwa kwezvinhu, VaPartson Mbiriri, vaudza Studio7 kuti pfungwa iyi ichiri kuzeyiwa sezvo pachiri kutsvagwa nzira dzingashandiswa nebazi reVehicle Inspection Department kana kuti VID, mukuongorora zvakare vatyairi vose.
Mazuva apera, hurumende yakakurudzira kuti vatyairi vemadutavanhu vange vachiongororwa zvakare hunyanzvi hwavo hwekutyaira senzira dzekuderedza tsaona dzemumigwagwa, idzo dziri kutora hupenyu hwevanhu vakawanda zvikuru.
Pane vamwewo vane pfungwa yekuti vatyairi vaongororwewo zvakare pakutyaira usiku, sezvo tsaona zhinji dzichinzi dziri kuitika usiku.
Nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekutakurwa kwezvinhu, VaBlessing Chebundo, vanoti komiti yavo yatotora danho rekuita musangano nemakomiti anoti yezvemukati menyika, neyezvekutongwa kwematunhu kuitira kuti vatsvage nzira dzinodzivirira njodzi dzemumigwagwa.
Mumwe mutyairi, VaGilbert Kagodora, vanoti chinofanirwa kuitwa nehurumende isati yatanga kuongorora vatyairi patsva, kuparadza huwori hwavati huri mubazi rezvekutakurwa kwezvinhu, zvikuru kuVID.
Hurukuro naVaGilbert Kagodora